Beach soccer – Tamaga Midôla : Mitarika vonjimaika i Boeny sy Melaky -
AccueilSongandinaBeach soccer – Tamaga Midôla : Mitarika vonjimaika i Boeny sy Melaky
Beach soccer – Tamaga Midôla : Mitarika vonjimaika i Boeny sy Melaky
Niditra tamin’ny andro fahatelo omaly, teny amin’ny tora-pasik’i Toamasina, ny fifanintsanana eo amin’ny fifaninanana beach soccer amin’ilay « Festival Tamaga midôla ».
Araka izany, saika nampiseho ny fahaiza-manaony avokoa ireo ekipa folo mandray anjara amin’izany, saingy ireo be traikefa no mbola manjakazaka sy mandravarava.
Ho an’ny filaharana ankapobeny taorian’ny andro fahatelo omaly iny izao, mitarika vonjimaika eo amin’ny vondrona « A » misy azy i Boeny, arahin’Atsinanana eo amin’ny laharana faharoa, ary nilatsaka ho eo amin’ny laharana fahatelo kosa i Atsimo Andrefana. Any amin’ny laharana fahefatra i Mananjary raha fahadimy i Sainte-Marie, izay samy mbola tsy nahita fandresena mihitsy.
Eo amin’ny vondrona “B” indray, mitarika vonjimaika i Melaky arahin’Analanjirofo eo amin’ny laharana faharoa. Mitana ny laharana fahatelo kosa i Menabe raha fahefatra i Brickaville, ary fahadimy farany i Manakara.
Ho an’ny fihaonana omaly, nanjakazakan’i Toamasina ny lalao nifanandrinany tamin’i Sainte-Marie. Toa ny nanao fanazaran-tena ireo mpilalaon’i Toamasina, izay ahitana ireo mpilalaon’i Barea eo amin’ny taranja beach soccer, toa an-dry Flavien Razafimahatratra sy Ymelda Razafimandimby, sns. Tafavoaka nandresy tamin’ny isa mavesatra, 11 noho 2, ny ekipan’ny renivohitr’i Betsimisaraka tamin’izany.
Teo amin’ny lalaon’i Mahajanga sy Mananjary indray, hita ho nanatombo tamin’ny fahaiza-manao sy ny traikefa ry zareo avy ao Boeny. Porofon’izany ny fananany ilay mpiandry tsatokazon’i Barea, izay efa tompondakan’i Afrika, Julio, sns. Nandresy an’i Mananjary tamin’ny isa mazava, 6 noho 2, i Mahajanga tamin’izany.
Mbola mitohy anio kosa ny fifanintsanana amin’ity fifaninanana beach soccer eo amin’ny “Festival Tamaga Midôla”, izay karakarain’ny fikambanana Tafaray ity. Marihina fa ireo ekipa mitana ny laharana efatra voalohany isam-bondrona no hiatrika ny lalao ampahefa-dalana, ny zoma 5 oktobra izao. Miara-dalana amin’izany ihany koa manomboka ny alakamisy 4 oktobra izao, ireo fifaninanana eo amin’ny beach volley sy beach handball, ary ny beach rugby. Sambany hisy eto Madagasikara sy eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena kosa ny beach rugby.
Mpiara-miasa amin’ity hetsika ao Toamasina ity kosa ny Vondrona RLM Communication, ahitana ireo gazety an-tsoratra sy haino aman-jery, La Ligne de Mire, Triatra, La Dépêche de Madagascar, Le Citoyen, akon’i Madagasikara, 24h Mada, La Chasse-Info, On Air Radio/TV…